Ndeipi mitambo inoita mari painternet?
6 mitambo inoita mari painternet
30 novembre 2021 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
Tekinoroji yakapinda meteoric shanduko inoratidzwa kuburikidza neinternet chishandiso. Iyo yekupedzisira inoita kuti zvikwanisike kuita akawanda emabasa asingasvikike kare. Izvi zvinosanganisira, pakati pezvimwe, kutenga online, teleworking, nezvimwe. Asi chinonyanya kufadza ndechekuti nekuda kwechishandiso ichi une mukana wekuwana mari nekutamba mitambo. Tsvaga kuburikidza nechinyorwa ichi mimwe yemitambo inobhadhara zvakanyanya painternet.
Online poker ndeimwe yemitambo inonyanya kufarirwa painternet. Inokwezva ruzhinji rwevatambi, vamwe vacho vanotamba sevasina basa kuti vafare. Vamwe, kune rumwe rutivi, vanove nyanzvi chaidzo uye vanowana raramo yavo online. Kune vamwe vanototenderera pasirese kuti vatore chikamu mumakwikwi, makwikwi epasi rose, nezvimwe. Unogona kuiridza pane imwe yeakanakisa kasinos akanyorwa pagwara Fan Online Kasino. Iwo mutambo une zvakawanda zvakanaka.
Kutanga, iwe une mukana wekuvaka capital kubva kutanga. Ipapo iwe unogona kungodzidza kuiridza sezvizhinji zvekuranga. Nechinangwa ichi, kune ekunyepedzera mari maakaundi anogona kukubatsira. Iwe unogona kushandisa nguva yakawanda uye mari sezvaunoda, nezvimwe.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mutambo we poker mutambo wemukana, asi umo unokurudzirwa kuvimba zvishoma nerombo. Chinangwa chemutambo ndechekufungidzira ruoko rwemudzvanyiriri uye kupokana iyo luck factor kuti ishandure mukufarira kwako. Izvo zvisiri izvo chete mhedzisiro yemukana.
Verenga zvakare: 20 yakanakisa yemahara mitambo ye iPhone
Iyo Black Jack
Blackjack mutambo wemakadhi waimbotambwa mumakasino. Nhasi inowanikwa mumakasino epamhepo. Kusiyana ne poker, mutambo uyu wakazara mutambo wemukana. Mumakasino epanyama, vamwe vaibiridzira vaikwanisa kuverenga makadhi kuti vafembere zvaizobuda. Izvi hazvigoneke painternet, sezvo makadhi anenge akagovaniswa. Iyo algorithm inoitarisira. Nepo vamwe vanhu vangave vasina kugadzikana nepfungwa yekasino chaiyo, pave paine makasino epamhepo ane vatengesi chaivo kwechinguva. Vanotorwa mafirimu vachigovera makadhi.
Roulette imwe zvachose hit-and-miss mutambo unozivikanwa nevatambi vepamhepo kasino uye inowanawo mari. Kufanana nemitambo yakawanda yepamhepo kasino, une sarudzo yekuyedza kubva kuaccount mari yekutamba. Iyi account inowanzo kupihwa neiyo online kasino kubva pakutanga.
Nheyo yemutambo we roulette iri nyore. Bhora rinokandwa muvhiri rinotenderera. Gumbo iri rine nhamba. Ichamira mushure mechinguva mubhokisi renhamba. Chaunofanirwa kuita kufungidzira kuti bhora richapinda nhamba ipi kuti rihwine. Kune nhamba 36. Zvisinei, zvinokwanisika kusiyanisa mabheti ako. Semuenzaniso, unogona kubheja pa:
All even number;
Nhamba dzese dzisinganzwisisiki;
Verenga zvakare: Shamwari yangu Peppa Nguruve yakazivisa Chinja
Iyo slot muchina
Slot machines ndeimwe yemitambo ine budiriro huru painternet. Kune marudzi akati wandei, uye dzimwe nguva anobvumidza iwe kuhwina jackpot. Iwe zvakare unowana bhonasi mitambo pane mamwe slot machines. Kana iwe ukarongedza zvimwe zviratidzo, mutambo unovhurwa, unoutamba, uye kanenge pese paunohwina mari. Iyi mitambo midiki inokutendera iwe kuhwina mahwindi madiki, asi aya akakwana kuti uwedzere mari yako, uye uwedzere mikana yako yekuvhura jackpot hombe yemuchina.
Kubhejera kwemitambo kwakakurumbira mazuva ano, zvese nevechidiki nevakuru. Iwo chikamu cheiyo mitambo yekubhejera iyo inokwanisika kuita raramo painternet. Asi kuti ubudirire mukuita purofiti, unofanirwa kunge uine shungu nazvo mutambo, asi pamusoro pezvose kuva nyanzvi mune imwe yadzo. Zvakare, iwe unofanirwa kujairana nemashandiro anoita kubheja, odds system, marudzi akasiyana ekubheja, nezvimwe.
Yakabhadharwa mitambo yevazhinji
Iwo madiki mitambo yepamhepo umo zvinokwanisika kuwana mari chero iwe uchirova vamwe vatambi. Ava vamwe vatambi zvakare vashandisi chaivo veInternet vane zvinangwa zvakafanana newe. Kune kuwanda kwemitambo inopihwa nemapuratifomu. Iwe une pakati pevamwe mitambo yemakadhi ekare senge belote, mimwe mitambo inonakidza semitambo yehunyanzvi kana arcade, nezvimwe.
Verenga zvakare: Maitiro ekubatanidza Stadia controller kufoni yako
Muchidimbu, zvinokwanisika kuwana mari painternet nekutamba mitambo. Iyi mitambo yekasino, kubheja kwemitambo, mitambo yevazhinji, nezvimwewo. Zvisinei, sezvinobvira kuwana mari yakakwana kuburikidza nemitambo iyi, zvinokwanisikawo kurasikirwa zvakakwana. Saka, zvakakosha kuziva nzira yekubheja.
Dzidza Zvakawanda NezveZvakanakisa Zvitsauko MuAssassin's Creed
Maitiro eku dhawunirodha nzizi usingazivikanwe uye kuvanza yako IP kero?